Marpipe: Vatengesi Vane Hungwaru Vanoda Kuedza Uye Kuwana Anokunda Ad Creative | Martech Zone
Kwemakore, vatengesi nevashambadziri vakatsamira pane vateereri vakananga data kuti vazive kupi uye pamberi paani wekumhanyisa kugadzira kwavo ad. Asi shanduko ichangoburwa kubva kune inoparadza data-migodhi maitiro - mhedzisiro yemitemo mitsva uye inodiwa yekuvanzika yakaiswa neGDPR, CCPA, uye Apple's iOS14 - yakasiya zvikwata zvekushambadzira zvichipokana. Sezvo vashandisi vakawanda uye vachiwedzera kubuda mukutevera, data yekunangisa yevateereri inova shoma uye isingavimbike.
Mabhureki anotungamira pamusika akachinjisa kutarisa kwavo kune chimwe chinhu chiri mukati mekutonga kwavo icho chinogona kuramba chine simba guru pakutendeuka: kuita kwekugadzira kwavo ad. Uye nepo kuongororwa kweA/B kwave kuri chiyero chekuyera simba rekushandura rekushambadzira, ava vatengesi vane hunyanzvi vava kutsvaga nzira dzekupfuura nzira dzechinyakare nekuvaka uye multivariate yekuyedza ad kugadzira pachiyero.
Marpipe Solution Overview
Marpipe inogonesa zvikwata zvevagadziri nevashambadzi kuvaka mazana ezvakasiyana-siyana mumaminetsi, kutumira otomatiki mufananidzo nevhidhiyo kugadzira kune vateereri vavo kuti vaedzwe, uye kuwana ruzivo rwemaitirwo akaputswa nechinhu chega chekugadzira - musoro, mufananidzo, ruvara rwekumashure, nezvimwe.
ne Marpipe, mhando uye masangano anogona:
Wedzera zvakanyanya huwandu hweakasiyana ekugadzira ad ekuyedza, ayo anowedzera zvakanyanya mikana yekuwana yepamusoro-vanoita.
Bvisa rusaruro kubva kumaitiro ekugadzira nekutsigira dhizaini sarudzo ine data rekushandura
Wana hungwaru pamusoro pekuti ndeapi ads uye ekugadzira zvinhu zviri kushanda uye nei kuitira kuti vagone kuita sarudzo nekukurumidza pamusoro pekuti ndeipi yekugadzira ad yekuyera uye yekudzima.
Vaka zvirinani kushambadza mukati isingasviki hafu yenguva - 66% nekukurumidza paavhareji
Traditional Creative Testing vs Marpipe
Automated Ad Building, At Scale
Sechinyakare, zvikwata zvekugadzira zvine bandwidth yekufunga uye kugadzira maviri kusvika matatu ads ekuyedzwa. Marpipe inovachengetedza nguva, zvichiita kuti makumi kana mazana emashambadziro agadzirwe kamwechete. Izvi zvinoitwa nekusanganisa yese inogoneka musanganiswa wezvinhu zvekugadzira zvinopihwa nechikwata chekugadzira. Kusiyanisa kweAd kunowedzera nekukurumidza nenzira iyi. Semuenzaniso, misoro mishanu, mifananidzo mitatu, uye mavara maviri ekumashure anova makumi matatu ads (30x5x3) nekudzvanya kwebhatani. Maitiro aya haawedze chete huwandu hweakasiyana ekugadzira ad yekuyedza, asi zvakare inomisikidza zvikwata zvekushambadzira kuti zvimhanye muyedzo wemultivariate papuratifomu yeMarpipe - kuisa misiyano yese yekushambadzira kune imwe neimwe uku uchidzora zvese zvinogoneka zvekugadzira zvakasiyana.
Gadzira otomatiki ese anogona kusanganiswa ad
Automated, Controlled Test Setup
Kana zvese zvakasiyana ad zvagadzirwa otomatiki, Marpipe ipapo otomatiki multivariate bvunzo. Multivariate test inoyera mashandiro ega ega musanganiswa wezvakasiyana. Munyaya yeMarpipe, zvinosiyanisa zvinhu zvekugadzira mukati mekushambadzira kwega kwega - kopi, mifananidzo, mafoni ekuita, nezvimwe. Yese kushambadzira inoiswa mune yayo ad set uye bhajeti rekuyedza rinogovaniswa zvakaenzana pakati pavo sekudzora imwezve shanduko inogona kukanganisa mhinduro. Miedzo inogona kumhanya kwemazuva manomwe kana gumi nemana, zvichienderana nebhajeti yemutengi uye zvinangwa. Uye misiyano yekushambadzira inomhanya pamberi pevateereri kana vateereri vemutengi, zvichikonzera nzwisiso ine musoro.
Multivariate bvunzo chimiro chinotyaira kugona uye inodzora ese akasiyana
Sezvo miedzo ichimhanya, Marpipe inoburitsa data rekuita kune ad yega yega pamwe neyega yega yekugadzira chinhu. Mateki epuratifomu anosvika, kudzvanya, kutendeuka, CPA, CTR, nezvimwe. Nekufamba kwenguva, Marpipe inounganidza mibairo iyi kuratidza mafambiro. Kubva pano, vatengesi nevashambadziri vanogona kusarudza kuti ndeapi ads ekuyera uye kuti ndeipi yekuongorora inotevera zvichienderana nemhedzisiro yebvunzo. Pakupedzisira, chikuva chinozove nekugona kuratidza kuti ndedzipi mhando dzezvinhu zvekugadzira brand inofanirwa kuyedza zvichibva panhoroondo yekusika njere.
Tsvaga kushambadzira kwepamusoro uye zvinhu zvekugadzira
Bhuku 1:1 Kushanya kweMarpipe
Multivariate Ad Creative Testing Maitiro Akanakisisa
Multivariate kuyedzwa pachiyero inzira nyowani, imwe yaisamboitika pasina otomatiki. Saka nekudaro, mafambiro ebasa uye pfungwa dzinodiwa kuyedza kugadzira ad nenzira iyi hazvisati zvaitwa zvakanyanya. Marpipe inoona kuti vatengi vayo vanonyanya kubudirira vanotevera maitiro maviri akanakisa kunyanya anovabatsira kuona kukosha papuratifomu pakutanga kwazvo:
Kutora modular yekugadzira maitiro kune ad dhizaini. Modular yekugadzira inotanga ne template, mukati mayo mune zvibatiso zvechinhu chimwe nechimwe chekugadzira kuti chirarame mukati mekuchinjana. Semuenzaniso, nzvimbo yemusoro wenyaya, nzvimbo yemufananidzo, nzvimbo yebhatani, zvichingodaro. Kufunga nekugadzira nenzira iyi kunogona kuve kwakaoma, sezvo chimwe nechimwe chekugadzira chinhu chinofanira kuve chine musoro uye chinofadza kana chakabatanidzwa nezvimwe zvese. creative element. Iyi dhizaini inochinjika inobvumira mutsauko wega wega wechinhu chega chega chekugadzira kuti chishandurwe muchirongwa.
Kuvhara musiyano pakati pezvikwata zvekugadzira nekuita zvekushambadzira. Zvikwata zvekugadzira uye zvikwata zvekushambadzira zvinoshanda mulockstep zvinowanzokohwa mibairo ye Marpipe faster. Zvikwata izvi zvinoronga bvunzo dzazvo pamwechete, vese vachisvika pane imwechete peji nezve izvo zvavanoda kudzidza uye izvo zvekugadzira zvinhu zvinovasvitsa ikoko. Havangovhuri chete ads anoita zvepamusoro uye zvinhu zvekugadzira kazhinji, asi zvakare vanoshandisa mhinduro dzebvunzo kune inotevera denderedzwa yekugadzira ad kuti uwane ruzivo rwakadzama nebvunzo dzese.
Iyo yekugadzira intelligence vatengi veMarpipe vanowana kwete chete inovabatsira kuti vanzwisise kuti ndezvipi zvekugadzira ad kuti vamhanye iyezvino asiwo izvo zvekugadzira ad kuti vaedze zvinotevera.
Maitiro eVarume Chipfeko Brand Taylor Stitch Yakafambisa Zvinangwa Zvayo Kukura Ne50% NeMarpipe
Panguva yakakosha mukufamba kwekambani kumusoro, timu yekushambadzira pa Taylor musono vakazviwana vaine bandwidth nyaya kune ese ekugadzira uye account manejimendi. Kufamba kwavo kwekuyedza kwekugadzira kwaive kwakareba uye kuchinetesa, kunyangwe nevashandi vevagadziri vane tarenda repamusoro uye mumiriri weadhiji anovimbwa naye. Maitiro ekuvaka kushambadzira kwekuyedzwa, kuendesa kune iyo agency kuti ikwidzwe, kusarudza vateereri, uye kutanga yaive nyore mavhiki maviri. Nezvibodzwa zvehasha zvakaiswa pakutora mutengi mutsva - 20% YOY - timu yeTaylor Stitch yaida kutsvaga nzira yekuyera kuedza kwavo kushambadza pasina kuwedzera vashandi kana mitengo.
Nekushandisa Marpipe kuita otomatiki kuvaka ad uye kuyedza, Taylor Stitch akakwanisa kuwedzera nhamba yeakasarudzika ekugadzira ad yekuyedza ne10x. Chikwata parizvino chinogona kuvhura bvunzo mbiri dzekugadzira pasvondo - imwe neimwe iine anopfuura makumi masere akasiyana ad akasiyana, ese aine chinangwa chekutsvaga vatengi vatsva. Ichi chikero chitsva chinovatendera kuti vaedze mitsara yechigadzirwa uye misiyano yekugadzira yavasina kumbokwanisa kuita. Vakaona zvinokatyamadza, senge chokwadi chekuti vatengi vatsva vanogona kushandura nekutumira mameseji maererano nekusimba uye kunaka kwemachira pane kuderedzwa. Uye ivo vakakunda zvinangwa zvavo zvekukura zveYOY ne50%.
Verenga Nyaya Yese yeMarpipe Nyaya
Tags: ad kugadzira njeredhizaini dhizainiruzivo rwekushambadziraad testad kuyedza njerekushambadzira kuedzazvoga kuyedzakuratidza ad testkuratidza advertising testfacebook ads manejakuwedzera ad performancemarpipemodular ad dhizainimultivariate kuyedzaTaylor musonoyokuedzwakuedza njere
Dhani inyanzvi yekushambadzira tekinoroji uye muvambi / CEO we Marpipe. Asati atanga Marpipe, Dan akatanga chirongwa chekushambadzira kubva mukamuri yake yekurara mukoreji, iyo yakashanduka kuita sangano rinokura nekukurumidza rakavakirwa muSoho, Manhattan iro rinonyanya hunyanzvi mukugadzira kugadzira uye kuda kugadzirwa kwemabhizinesi eDTC. Marpipe yakatanga kugadzirwa apo sangano rakapinda mudambudziko nekuyedzwa kwekugadzira, uye nhasi, Marpipe yakwidza mari inopfuura madhora gumi kubva kune zvinodiwa neAdobe, Samsung, uye vatariri kuBuzzfeed, Hubspot, MediaMath, uye Criteo.
Nei Vatengi Vachikurirwa neB2B E-Commerce Personalization (Uye Magadzirirwo Ayo)